Maitiro Ekuita Chitima Chemafaro Kunyangwe Yakawedzera Budget-Inoshamwaridzika | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Maitiro Ekuita Chitima Chemafaro Kunyangwe Yakawedzera Budget-Inoshamwaridzika
Kufamba nechitima chiitiko chinonakidza chinopa mibairo mizhinji. Zvitima zvinokuunza padyo nenzvimbo: hauzoone boka remakwai richifura kana kufema kunhuwirira kwemunda wema tulips kubva pachigaro chepakati cheAirbus. Zvitima zvinogona kukuchidzira iwe kumucheto uye kuisa iwe pakati peguta pasina nguva. Iwe unogona kutambanudza uye kuzorora uye kutaura kubva pa kureba kure nevamwe vaunofamba navo paunokwira chitima. Vamwe vangati kufamba kwechitima mubayiro wacho wega nekuti pese patinokwira chitima, isu tinobatsira kuchengetedza indasitiri yakakosha uye tsika ine hupenyu. Asi nhasi tiri pano kuzotaura nezverumwe rudzi rwemubairo-mumwe unogona kukubatsira iwe tora zvakawanda kutasva zvitima uye ona yakatowanda swath yenyika kana maitiro ekuita chitima kushambadzira kunyangwe yakawanda bhajeti-inoshamwaridzika. Ivo ndivo mhando yemubairo wakapihwa nemakambani ekufamba kadhi rechikwereti. Uye kuatora ivo inogona kunge iri zano rehungwaru rekubhadhara mazororo aunorota kutora.
1. Maitiro Ekuita Chitima Chemafaro Kunyangwe Yakawedzera Budget-Inoshamwaridzika: Kufamba Kiredhiti Kadhi Akasiyana
Vanhu vanowanzo chengeta echinyakare makadhi echikwereti muzvikwama zvavo nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka. Dzimwe nguva tinotakura kadhi rechikwereti kuti tidzivise kuva nemari yakawanda muhomwe dzedu — tsika inogona kuva nenjodzi, kunyanya patinenge tichifamba. Makadhi echikwereti anotibatsirawo kubhadhara kutenga zvatisingakwanise kubhadhara zvese kamwechete, ngazvive izvo zvinodiwa kana zvakanaka-kuva-nazvo. Iyo yekutanga tsika ndiyo yakanaka nzira yekushandisa yekufamba kiredhiti. Saizvozvo, nzira yakanakisa yekuwana mibairo kubva kune yako yekufamba kiredhiti kadhi kuishandisa kazhinji, kunyanya pakutenga kukuru. Asi tsika yechipiri inogona kuve nenjodzi kana uchishandisa kiredhiti kadhi kiredhiti. Sei? nekuti, apo iyo avhareji yemari yemari inobhadharwa nekambani yemakadhi echikwereti seyakazara-uye iwe unogona kuwana akawanda anobhadharisa mashoma-ari 14.52%, mamwe makadhi echikwereti ekufambisa anobhadharisa kumusoro kwe 25%. Uye vazhinji vanobhadharisa mari inorema yemari yegore pamusoro peiyo. Kutakura mwero wakakwira pakadhi kiredhiti kiredhiti kuchakwidza mari yako yechimbadzo pasina nguva. Saka mutemo wekutanga wekushandisa yekufamba kiredhiti kadhi haimbofaniri kubhadharisa yakawanda kwariri kupfuura iwe yaunokwanisa kubhadhara mubhadharo mumwe chete.
2. Zvakanakira Kusevenzesa Yekufamba Kiredhiti Kadhi
Kufamba kiredhiti kadhi makambani ane shungu kuve nebhizinesi rako. Vanokwikwidzana nemamwe makambani kuti vaiwane. Kupa yakasarudzika uye yakasimba chirongwa chemubairo ndiyo nzira huru yavanozvisiyanisa pachavo mumusika uye kukwezva vatengi.
Perks inomhanya iyo gamut. Mamwe makambani anokupa mubairo neakawandisa mafirita mamaira. Ngatitii iwe uri New Yorker kuronga rwendo rwekunonoka rweBordeaux, chikamu chekutanga cherwendo rwako chingangove chiri chekuenda kuParis-izvo zvinogona kunge zviri izvo zvakanyanya kubhadharisa rwendo rwako. (Izvo kunze kwekunge iwe uchiravira zvimwe zvisingawanzo vintages!) Iwo anowanzo kufamba mapepa mamaira iwe aunogona kutenga iyo tikiti yendege kwauri. Mamwe makambani emakadhi echikwereti anofamba anosanganisira evamwe vatiketi veshamwari sechikamu chemubhadharo wavo, saka unogona kuunza shamwari pamwe pazvakanakisa. Mamwe makambani anopa mibairo inogona kuita kuti kutiza kwako kunakidze, kubva -kutanga-kirasi kukwidziridzwa kune yakasarudzika kuwana kune eyounline lounges munhandare dzepasi rose. Discounts kumahotera nemaresitorendi zvakare kuverenga mune mamwe mafambiro emakadhi echikwereti 'mubayiro chimiro.
3. Maitiro Ekuita Chitima Chemafaro Kunyangwe Yakawedzera Budget-Inoshamwaridzika: Sarudzo Yedu Yezviwanikwa
Iyo inonyanya kuchinjika perk iwe yaunogona kuwana ndeye kudzoserwa pane zvaunotenga. The akanakisa ekufambisa makadhi echikwereti kubhadhara 2% dzoka pane zvese zvawakatenga. Vamwe vanowedzera muzana yavo yekudzosera mari kune yakawanda seye 6% mumapoka akasarudzwa, kusanganisira nendege, kunodya, nekutenga muhotera. Kana iwe ukashandisa kiredhiti kadhi rako rechikwereti zvakajairika - kunyangwe kubhadhara kune zvezuva nezuva zvinhu senge grocery uye gasi - mari mibairo inogona kuwedzera kumusoro nekukurumidza uye ishandiswe kudzikisira chero mari yekufamba iwe yaunoda, kusanganisira yako inotevera chitima kupfuura. Asi zvakare, zvinongonzwisisika kushandisa yako yekufamba kiredhiti kadhi nenzira iyi kana iwe wakagadzirira kubhadhara yako bharanzi mwedzi wega wega.
4. Matipi Ekusarudza Kiredhiti Kadhi Kadhi
Kufamba kiredhiti makadhi anowanzo shandisa imwe mhando yenzvimbo poindi kuverenga mibairo yaunowana uye masisitimu aya anowanzo kuve akaomarara. wo, mamwe makadhi anoisa chinodikanwa chekutenga usati wawana chero poindi zvachose. Semuyenzaniso, ungangodikanwa kuti uite $1000 kana zvimwe mukutenga pamusoro pemwedzi mitatu usati watanga kuwana mapoinzi. Kuisa tikiti yendege pakadhi rako rechikwereti inzira iri nyore yekusangana nepashoma. Asi iwe unogona zvakare kusangana nazvo uchishandisa kadhi rako kwemwedzi mishoma kubhadhara kwezuva nezuva mari. Ingova nechokwadi chekutevera zvaunotenga kuti uve nechokwadi chekuti uri munzira mwedzi wega wega kuti uwane chinangwa chako chekushandisa.
Kubheja kwako kwakanyanya kuenzanisa imwe neimwe yemakadhi iwe auri kuongorora maapuro nemaapuro. Iwe ungangoda kugadzira spreadsheet nekuda kwechinangwa ichi kuve nechokwadi kuti uri kutora ese maficha ekadhi rega rega uye uchiita kuenzanisa kwakanaka. Ive neshuwa yekuisa kufarira APRs, zvishoma zvekutenga zvinodiwa, cashback muzana, uye mari yegore negore yako kadhi inobhadharisa mukuverenga kwako.
5. Maitiro Ekuita Chitima Chemafaro Kunyangwe Yakawedzera Budget-Inoshamwaridzika: Imwe Yekupedzisira Kurudziro
Wanderlust inogona kuve irrepressible kukurudzira. Sezvo nyanzvi dzekufamba, tinokukurudzira kushandisa chikwereti zvine ruremekedzo. wo, tinokukumbira kuti utarise mutoro wako kupasi. Kuita sarudzo dzekufamba idzo dzine yakaderera nharaunda kukanganisa, zvakaita se achifamba nechitima pachinzvimbo chemotokari kuti uone nzvimbo yako inotevera, ndiyo imwe nzira yekufamba uchiri wechokwadi kumisimboti yekusimudzira.
Offenburg kuenda kuFreiburg Chitima Mitengo
Stuttgart ku Freiburg Chitima Mitengo
Leipzig kuenda kuFreiburg Chitima Mitengo
Nuremberg kuenda kuFreiburg Chitima Mitengo
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga zororo rako muEurope nechitima.
Unoda embed yedu Blog pambiru "How To Ita A Train Adventure Kunyange More Budget-Friendly" zviende yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/train-adventure-budget-friendly/?lang=sn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, iwe unowana edu anozivikanwa nzira dzechitima - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / ja kana / of uye mimwe mitauro.
BudgetFriendly Kiredhiti TrainAdventure Train Travel TravelCreditCards
Susan Doktor mutori wenhau uye bhizinesi kuronga uyo anobva kuNew York City uye akafamba zvakanyanya nechitima. Iye anonyora nezve dzakasiyana siyana misoro, kusanganisira mari, famba, uye chikafu newaini. Mutevere pa Twitter @branddoktor kana iwe unogona kubaya pano kuti ndibate